KMF-CNOE “Fiara-mientana no ahombiazana!”
Namoaka fanambarana ny KMF/CNOE-Fanabeazana Olompirenena manoloana ny aretin-mandoza “coronavirus” izao. Voalohany,mbola manamafy hatrany
Minisitry ny atitany Niantso fahamatorana ho an’ireo sehatra tsy miankina
Aoka isika mba ho matotra, hoy ny minisitry ny atitany, Tianarivelo Razafimahefa, omaly mantsy ireo sehatra tsy miankina mbola voatery manohy ny fampiodinana
Fahafahan’ny mpanao gazety mivezivezy Nifampiresaka tamin’ny minisitera ny OJM
Malalaka manomboka izao ny mpanao gazety amin’ny fikaroham-baovao, raha ny fampitam-baovao avy amin’ny sekretera jeneralin’ny holafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara (OJM),
Paikady sy serasera Misy fomba fiasa tokony amboarina ihany
Niteraka resabe sahady omaly ny mikasika ny fanomezana 5 tapitrisa ariary izay manome vaovao na mahatratra ilay vehivavy nolazaina fa nanely tsaho raha nilaza fa efa maherin’ny 200 isa no voan’ny Coronavirus eto Madagasikara.
Vahoaka malagasy Mitady ho mandrimandry manana aretina sahady
Andro fahaefatra amin’ny fihibohana, andro iray taorian’ny nilazan’ny filoham-pirenena, Andry Rajoelina, fa tsy nahitana tranga vaovao intsony taorian’ireo olona nitondra ny otrikaretina
Halatra finday sy vola Nidoboka eny Antanimora ilay jiolahy tsy ampy taona
Nalefa eny Antanimora Lehilahy iray 17 taona no voasambotry ny Polisy avy ao amin’ny kaomisarian’ny Boriborintany faha-07 etsy 67Ha noho ny resaka fanendahana.
Kaominina ivato Zaraina cache bouche sy gel maimaim-poana ny vahoaka
Zaraina cache bouche sy gel maimaim-poana fanadiovana tanana tsy mandany rano reo vahoaka ao amin'ny kaominina Ivato.
Taorian’ny fifampiraharahana nandritra ny volana maromaro, dia lasany tamin’ny vidiny 20 tapitrisa dolara io, raha ny vaovao navoakan’ny Gazetiboky Jeune Afrique. Manana ny petra-bola 60% ao anatin’io Euronews NBC io ilay mpanefoefo Ejiptianina Naguib Sawiris), ary izao lasan’ny Sipromad izao ny Africanews anisan’ny tena matanjaka ao anatiny. Ny volana aogositra 2018 dia efa novidian’i Ylias Akbaraly ihany koa ny orinasa Thomson Broadcast misehatra amin’ny tontolon’ny fitaovana sy fampitaovana ary ny rindram-baiko amin’ny sehatry ny haino aman-jery. Arak’io loharanom-baovao io ihany dia mety hafindran’ny Sipromad any Abou Dhabi (Arabie Saoudite) ny foibe toeran’ity televiziona ity izay tany Pointe noire (Congo-Brazzaville) no nisy azy hatramin’izay. Fampahafantarana sy fanitarana bebe kokoa ny orinasany sy ny fandraharahana ataony hivelatra amin’ny sehatra iraisam-pirenena no anton’io fividianana ny Africanews io. Midika io fa mivelatra sy mitombo ny ambaindain’ny harena sy ny fandraharahana ataony.